Maalinta: Abriil 7, 2019
BozankayaGawaarida Magaalada Waxaa Lagu Bilaabay Thailand
2016 waxay aasaastaa iskaashi lala yeesho Siemens Mobility Bozankayawuxuu ku dhawaaqay gaariga ugu horreeya ee dhulka hoostiisa ah ee qandaraaska billoowga 25 bilood ka dib xarumaha laga soo saaray ee ku yaal Ankara. Laga bilaabo Juun 2018, tareenadu waxay bilaabeen inay rarnaadaan 15.000 kiiloomitir [More ...]
Samsunspor Sarıyer Kulanka Tram 6 Waqti Bilaash ah
Dawlada Hoose ee Magaalada metela ee Samulaş AS, bayaan ay soo saartay maanta oo ay dheceyso ciyaarta Samsunspor-Sarıyer ee udhaxeysa sanadki taraamka 12.00-18.00 ayaa lagu sheegay inay ahayd bilaash. Bayaanka ay soo saartay dowladda hoose, kaarka Passolig, tigidh warqad ah, [More ...]
Dalka Poland, tareenku wuxuu dillaacay ambalaaska
Isgoys kuyaal magaalada Puszczykowo ee Poznan, Poland, ambalaas ayaa ku dhacay tareen, iyadoo gadaal gadaal ay ku xayiran yihiin biraha. Shilka ayaa ka dhacay Puszczykowo, oo ka tirsan gobolka Poznan ee Poland. ambulance [More ...]
Pedals ka soo horjeeda Kansarka
Qeybta Adeegyada Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Kocaeli ee Magaalada Kocaeli, ardayda iyo mutadawiciinta baaskiilka si kor loogu qaado wacyiga iyo wacyiga ku saabsan baarista kansarka ee Izmit. 15 Luulyo Dardaaranka Qaranka [More ...]
Guddoomiyaha Guddiga Doorashada ee Bursaray
Duqa Magaalada Bursa Alinur Aktaş, Saldhigga Osmangazi, hambalyada muwaadiniinta saaran tareenka dhulka hoostiisa mara, wuxuu kaloo dhageystay dhibaatooyinka. Madaxweyne Aktaş, gaar ahaan marka shaqada kobcinta calaamadaynta la dhammeeyo daqiiqadaha 3.75 sugitaanka [More ...]
14 waxaa qaban qaabin doona Spor Istanbul, oo ah shirkad hoos timaada Dowlada Hoose ee Magaalada Istanbul, iyada oo hoos imaanaysa magaca kafaala qaaday Vodafone. Istanbul Half Marathon 7 Abril 2019 Axadda, 74 waxay isu keentaa kumanaan ka mid ah ciyaartooyda 8 ee ka kala yimid wadamo kala duwan. [More ...]
Maanta oo ku taal Taariikhda 7 Abriil 1917 Taarikh loo yaqaan '13' madaafiicdii Masaarida, oo ay weheliso Bedouins oo uu amar ku bixiyay Lawrence, waxay burburiyeen xayndaabka 20 iyo dhowr garaacyo telefishan oo u dhexeeya Müderric-Hediyye. Ka dambeya weerarada [More ...]